Fadeexad ku gadaaman heshiisyada madaxda dawlada federaalku ay la galeen sharikaadka ajaanibta ah. – Radio Daljir
Muqdisho, Jan 31 – Waxa soo baxaya tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan jihadii ka dambaysay iyo dhinacyadii ku lug lahaa heshiis muran badan dhaliyay oo ay dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya la gashay shirkad ajaanib ah oo lagu magacaabo ‘Saracen International’. Tafaasiisha ugu horeeysa ee laga helayo arinta ayaa muujinaya in heshiiskani uu dawr wayn kulahaa guddoomiyaha barlamaanka federaalka KMG ah ee Soomaaliya Md. Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Fadhi uu maanta oo Axad ah (30-ka Janaayo) Muqdisho ku yeeshay golaha barlamaanka federaalka ayaa waxa horyimid ra?iisul-wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar ka mida xubnaha xukuumaddiisa halkaas oo ay ku soo bandhigeen natiijada baaritaan ay ku soo sameeyeen duruufaha ku meeraysan heshiiska dhaliyay muranka iyo isku-tuur-tuurka badan ee ay xukuumaddu la gashay shirkadda Saracen.
Warbixin: R/wasaare Farmaajo, Jan 30.
Xildhibaan Cabdiladdiif Muuse Nuur oo kamid ahaa xildhibaannadii fadhiyay kulankii maanta ayaa Radio Daljir u xaqiijiyay in xukuumadda ra?iisul-wasaare Farmaajo ay soo hordhigtay barlamaanka caddaymo muujinaya in guddoomiyaha barlamaanka Shariif Xasan Sheekh Adan uu yahay mas?uulkii heshiiska la galay shirkadda Saracen. Heshiiskan oo uu Shariif Xasan galay xilligii uu ahaa ra?iisul-wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka maaliyadda ayay xogta la soo bandhigay waxa ay tilmaamaysaa in lacag hal milyan oo doollar ah (1 milyan) lagu shubay xisaab bangi oo uu Shariif Xasan ku lahaa dalka Imaaraadka Carabta. Xisaabtaas ayaa xiran tay wax yar dabadeed marka lacagtii lagu shubay uu la baxay Shariif Xasan sida xogtu soo bandhigtay.
Waraysi: Xildhibaan C/ladhiif, Jan 30.
Xogta ay soo bandhigtay xukuumadda federaalka ah maanta waxa barlamaanka ka hor akhriyay guddoomiyaha guddi horay loogu saaray baaritaanka fadeexaddan Prof. Cabdiwali Maxamed Cali-Gaas oo ah ra?uusul-wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka Qorsheeynta iyo xiriirka caalamiga ah.
Warbixin: Prof. C/weli Maxamed Cali, wasiirka Qorshaynta, Jan 30:
Ma jiraan wax jawaab dag-dag ah oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka barlamaanka Shariif Xasan Sheekh Adan, iyada oo uu guddoomiyuhu isla markiiba laalay fadhiga. Sida uu xildhiban Cabdiladiif u sheegay Daljir, qorshuhu waxa uu ahaa in barlamaanku uu ka doodo xogta loo soo bandhigay. Daljir uma suura-galin in ay ilo kamadax-bannaan kuwa hay?adaha dawladda ay warkan ka xaqiijiso. Sidoo kale ma ay jiraan wax jawaab ah ama faallo ah oo wali kasoo baxay shirkadda Saracen oo khuseeysa xogtan cusub.
Inkasta oo ay jiraan su?aale kale oo wali baaqi ku ah fadeexaddan ayaa haddana tallaabadani waxa ay culays siyaasadeed oo mug leh ku tahay guddoomiyaha barlamaanka federaalka KMG ah Shariif Xasan Sheekh Axmed oo ah shakhsiyad miisaan siyaasadeed oo wayn ku dhex leh haykallada dawliga ah ee Fadaraalka Soomaaliya.
Barlamaanka ayaa xilli sii horeeyay xukuumadda Farmaajo ka codsaday in ay xog-dhab ah oo dhamaystiran ka keenaan heshiiska ma?suuliyaddiisa la isku tuur-tuuray ee dhex maray dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo Shirkadda Saracen. Horay ayay xukuumadda ra?iisul-wasaare Farmaajo waxa ay isaga fogeeysay heshiiskan iyada oo sheegtay in la galay xilligii ra?iisul-wasaare Sharmaarke. Si kastaba ahaatee ra?iisul-wasarihii hore ee xukumadda federaalka Cumar Cabdirshid Ali Sharmaamke ayaa sheegay in uusan heshiiskaan galin saxiixiisana lagu been-abuurtay isaga oo xafiiska madaxwayne Shariif ku eedeeyay been-abuurka.
Waxaa jira tuhun tibaaxaya in heshiisyadu aanay ku koobnayn oo keliya afhayeenka baarlamaanka, balse uu ku leg leeyahay M/weyne Sh. Shariif Sh. Axmed oo ay xulufo siyaasadeed yihiin.
Wasiirka Warfaafinta xukuumadda federaalka KMG ah Cabdikariim Xasan Jaamac ayaa dhawaan sheegay in ay xukuumaddiisu joojisay heshiiskaas, mase jiraan wax jawaab ah oo ay tallaabadaasi ka bixisay shirkadda Saracen.
Dhawaan ayay wakaaladda wararka ee AP waxa ay bannaanka u soo saartay xiriir ka dhexeeya asaasihii shirkadda Balackwater Erik Prince iyo shirkadda Saracen. Xiriirkaas ayaa markiisana gabi ahaanba su?aal galiyay hufnaanta iyo sumcadda iyada oo madaxa lagu wada hayo dilalkii iyo xad-gudubyadii ay Blackwater ka geeysatay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.